MoviePass dia nanao zavatra tsy misy dikany firy tao amin'ny 2018 fa ny 60% ny mpampiasa dia nanaisotra ny dokam-barotra - BGR - TELES RELAY
HOME » TOEKARENA MoviePass dia nanao zavatra tsy misy dikany firy tao amin'ny 2018 ka nahatonga ny 60% ny mpampiasa nanaisotra ny dokam-barotra - BGR
Tao amin'ny 2018, ny orinasa MoviePass dia helo. Ny sarimihetsika fividianana sarimihetsika dia naneno ny tononkalon'ny mpanjifany, nampiasa karazana fanitsiana mampihetsi-po ary nampihatra fepetra ara-bola mahatsiravina tao ambadiky ny sehatra mba hanonerana ny korontana. Ny serivisy koa dia tsy maintsy niatrika fandraketana an-gazety izay nanadihady ny orinasa, ary ny Prosecutor General New York dia nanokatra fanadihadiana momba ny hosoka tamin'ny orinasa misahana ny serivisy, noho ny fepetra tsara.
Tsy mahagaga raha nahare fa ny 60% an'ny mpisera MoviePass dia nanaisotra ny fametahana 2018 azy ireo.
Ity dia navoakan'ny fanadihadiana vaovao momba ny fampiharana ara-bola Trim, izay nandinika ny fampiasam-bola 400 an-tapitrisany amin'ny 2018. Ny angon-drakiny dia mampiseho, ankoatra ny zavatra hafa, fa ny fanafoanana ny ankamaroany dia tamin'ny fahavaratra. Amin'ny ankapobeny, tamin'ny volana Jona sy Jolay, raha toa ka ny filazana ny vaovao ratsy momba ny MoviePass dia toa teo amin'ny tampony. Nandritra ny fotoana nahafantarantsika fa ny AMC dia nanao ny drafitrasam-pampiasam-pandraharany manokana, ny MoviePass dia toa nipoaka tsy ara-potoana nandritra ny fotoana fohy ary tsy namela ny mpampiasa mividy tapakila Biggest blockbusters studio amin'ny alalan'ny app.
Ho tsaroanao izany ho karazana Netflix ho an'ny sarimihetsika sarimihetsika. Mialà ao anaty fonosana, ary hahita sarimihetsika maromaro ao amin'ny teatra ianao.
Izany rehetra izany dia nanomboka tamin'ny faniriana goavana toy izany. Ny tale jeneralin'ny MoviePass, Mitch Lowe, mpitarika ny Netflix sy Redbox teo aloha, dia mety nanana fahombiazana. Nilazany Lowe BGR roa taona lasa izay, ny vokatra tahaka izany dia safidy tsara, satria efa am-polony taona izao no hanaiky ny famandrihana - "ary, amin'ny lafiny, 75% ny mpanjifanay dia an'arivony taona. "
Mazava ho azy fa tsy niasa tsara hatramin'izao ny zava-drehetra.
Ho hitantsika raha hiova ny toe-draharaha amin'ity taona ity. Tamin'ny fiafaran'ny 2018, MoviePass dia nanambara ny drafitra telo-tier vaovao hanoloana ny drafitra misy azy amin'izao fotoana izao. Ny drafitra ankehitriny dia manomboka amin'ny $ 9,95 isam-bolana ka hatramin'ny farany ambany 24,95 $ eo an-tampony. Ny tombony dia mitombo, anisan'izany ny famokarana horonantsary miovaova amin'ny farany ambany, ary ny zava-drehetra izay mitranga ao amin'ny teatra dia tsy misy sarimihetsika ao 3D sy IMAX. dia ahitana sarimihetsika 3D sy IMAX miaraka amin'ity drafitra ity.
Sary loharano: Cummings Function / AP / REX / Shutterstock
Kamerona - Budget 2019: FCFA miliara FCFA ho an'ny faritra afovoany